I-China entsha ye-Anti-Coronavirus Anti-Dust yokuKhusela iimaski i-Kn95 Face Masks zokuzikhusela, uKhuselo lobuso obuKhuselayo oluvela eTshayina kwiTopChinaSupplier.com
I-KN Izixhobo ezincinci
Ibheji, iMedal, iiMali, i-Lapel Pin, i-Keychain, i-Lanyard, i-Wristband, i-Bhukumaka, Inja Tag, ..
Imask, Kn95 Mask, Ce Mask umenzi / umthengisi eTshayina, ebonelela ngeFaster Delivery ekumgangatho ophakamileyo I-Kn95 yobuso be-Mask Ce, Umbala weCustom Highquality New Resin Multi-Faceted Dice 1-7 Layer color used in Dnd Games Loaded Dice Game Custom, Promotional Customised Metal Lapel Izikhonkwane ze-Pipeji ye-Doove ye-Pipe ye-Metal Botton kunye nokunye.
Indawo yokubonelela Khu seleko no Khuselo Iimveliso zoKhuseleko kunye neziBonelelo Ukukhusela ubuso Buso I-China entsha i-Anti-Coronavirus Imaski yokuKhusela ukuHamba ye-Masks i-Kn95 yemasks yokuKhusela ukuKhuselwa
Izixhobo ze-200 I-US $ 2.50 / iziqwenga
IZhongshan, iGuangdong, China
Imaski yokuKhusela imitha
Igama lemveliso: I-N95 yobuso bemaski yabantu abadala okanye abantwana
Ixesha lokuthumela: esitokhweni, Ilungele ukuthunyelwa
Umgangatho: I-GB2626-2006 KN95
Ingqimba yoMphezulu:I-polypropylene spunboIlaphu elilaphu
Indawo yokuqala yokuPhakathi:Umqhaphu womoya oshushu
Ulwakhiwo lwesiBini lwesiBini: Mall-blown Ilaphu
Ungqengqelo lwangaphakathi:I-polypropylene spunboIlaphu elilaphuUkucoca uSwab
phawu: Susa i-95% yamasuntswana omoya kunye nongcoliseko, thintela i-spatter, kunye nokuthintela i-ba-ba ethile engeyi-oyileamasuntsuli sed kunye neereroli.
Ukupakisha: I-20pcs / ibhokisi yemibala
Ubunzima obukhulu obuthile: 20g
ukusetyenziswa: I-COVID-19, Anti-germs, thintela umkhuhlane, Anti-uthuli, Anti-inkungu, anti-haze, Anti-PM2.5
yokuqinisekisa: I-ISO / SGS / LA / CE
TUmjikelezo oDibeneyo ype iindlebe zinxibe
Ixabiso lokucoca: ≥95% (0.075μm amasuntswana)
Izinto ezilahlayo ze-Mas95, ezasecurity kunye ne cokulula ekusebenziseni.
Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ezikhuselekileyo, ezithambileyo nezikhululekileyo.
I-95% yokuhlunga, inikezela ukhuselo lwe-anti-bacteria kunye nokukhusela uthuli kuwe.
Ukukhusela kwiinkcenkceshelo zomoya kunye nongcoliseko.
Imitya ye-elastic kunye neekliphu ezihlengahlengisiweyo zekhephu zobuso ezahlukeneyo nobukhulu. Igqibelele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nemisebenzi yangaphandle.
Hlunga i-PM2.5, intsholongwane, iintsholongwane, intsholongwane kunye nezinto eziyingozi emoyeni, khusela impilo yakho!
I-1) Imaski mhlawumbi inomahluko ukusuka kwimifanekiso kwezinye iindawo, ukuqina kunye nombala, njlnjl.
2) Izitayile ezixubekileyo ekupakisheni ukuthengisa kwenzeka ngamanye amaxesha (kodwa Ukupakisha oomatshini zonke iimaski zinemisebenzi efanayo kunye nolwakhiwo olufanayo), enkosi ngokuqonda kwakho kohlobo.
1.Ixabiso lakho liphezulu kakhulu, ndingafumana amaxabiso aphantsi?
Ukunyaniseka, sikwacinga ukuba ixabiso liphezulu kakhulu ngoku.kodwa ngoku imveliso yemaski ichaphazelekile e-China ngentsholongwane, ilizwe liphela limfutshane kwiimaski. Ke, nkqu uhlawula i-5USD / pc, akunakubafumana abathengisi kwisixeko sakho, ngoba uninzi lwazo zithengiwe eTshayina. Umthamo wemveliso kaMask ulinganiselwe, abathengi bangaphezulu kakhulu kubaxhasi ngoku. Ngaphandle koko, izinto eziluhlaza, ibhokisi yokupakisha, iindleko zokuhambisa kunye neendleko zabasebenzi zonke bezikhula ukususela kwiiveki ezidlulileyo.
2.Kude kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?
Ngokubanzi ziintsuku ezi-1 ukuba iimpahla zikwisitokhwe. okanye ziintsuku ezi-3 ukuba iimpahla azikho esitokhweni, kuhambelana nombala nobungakanani.
Uku-odola, nceda contact intengiso yethu.
Ifanitshala yanamhlanje yerattan yangaphandle ehleliweyo etafileni yokutyela kunye nezitulo
US $ 286.76 / Beka
Isigadi sePatio egumbini elingunxantathu yoMlilo weTafile yeRattan yoMlilo weFanitshala yeRhasi yoMlilo
US $ 249.00 / Beka
Ifanitshala yangaphandle yangoku enguMntu ohleliyo ngaphakathi kwi-Swing 2
US $ 175.00 / Iipayile
Isitulo samva sepatio esijingayo iRattan imilo yokujija isihlalo esijinga isitulo esijingayo
US $ 119.00 / Isiqwenga
Khu seleko no Khuselo Iimveliso zoKhuseleko kunye neziBonelelo Ukukhusela ubuso Buso
Ukukhusela ubuso Buso
I-mask yokuKhusela ubuso
Imaski yoKhuseleko ebusweni
Umdaka wobuso bumdaka
I-China elahliweyo iMask ekhuselweyo yoBuso beMask Kn95
US $ 2.50 / Iipayile
I-China Wholesable FDA Ce Ukhuseleko lwe-Anti Virus White
I-China Factory Ukuthengisa iMaski yobuso ye-China nge-95-Lay
I-China entsha i-Anti-Coronavirus i-Anti-Dust ekhuselayo
Ifektri yaseTshayina yoBonelelo oluNgabonakaliyo lweMasks Kn95
Immimiselo & nemiqathango Isibhengezo umthetho wabucala I-KN Izixhobo ezincinci